Chile dia firenena mahaliana miaraka amin'ny vahoaka mandroso sy ny fomban-drazana. Hatramin'ny vao haingana dia nahasarika mpizahatany vahiny izay tsy mahagaga ny hatsaran-dry zareo an'i Eoropa na ny tsy fahampian'ny tany Atsinanana. Isan-taona, nanomboka nitsidika mpizaha tany bebe kokoa i Chili. Amin'izao fotoana izao, any amin'ny firenena manana faritra maherin'ny 750 000 km², misy seranam-piaramanidina efatra.
1. Ny seranana am- pilaminana iraisam-pirenena no be mponina indrindra eran-tany, ny voalohany dia Carriel-Sur . Eo afovoan'i Chile izany. 8 kilometatra miala ny tanànan'i Concepción . Nosokafana tamin'ny 1968 ny seranam-piaramanidina ary mbola mavitrika. Ho an'ny taona 2012, Carriel-Sur dia manisa mpandeha 930 000 maneran-tany. Mandritra izany fotoana izany ihany koa dia manaiky ny fiaramanidina amin'ny fiaramanidina Shiliana telo lehibe izy: LAN Airlines, Sky Airline ary PAL Airlines.
2. Ny seranam-piaramanidina faharoa iraisam-pirenena dia nomena ho fanomezam-boninahitra an'i Commander Arturo Merino Benitez , mahaliana fa fantatra amin'ny anarana hoe " Airport Airport " sy "Pudahuel Airport" izy. Ny anaran'ny tsy ofisialy azony dia azony noho ny toe-draharaha ara-jeografika, satria ny seranan-tsambo dia manakaiky ny renivohitr'i Santiago , ao amin'ny commune, ny anarana nomeny azy. Ny seranam-piaramanidina Arthur Benitez no lehibe indrindra ao amin'ny firenena, mametraka ny firaketana ny isan'ny fiaramanidina nalaina isan'andro. Nandritra ny herintaona dia maherin'ny 60.000 izany isa izany, dia isaky ny folo minitra ao amin'ny seranam-piaramanidina Benitez no misy ny fiaramanidina. Ny seranam-piaramanidina dia manatitra sidina an-dalampandrosoana maromaro: Eoropa sy Amerika. Ankoatra izany, ny seranam-piaramanidina dia ny "rohy mampifandray" eo anelanelan'i Amerika Latina sy ireo firenena any amin'ny Oseana Pasifika. 82% -n'ny ampahatelon'ny fiaramanidina izay miasa amin'ny seranam-piaramanidina dia orinasan'ny orinasa Shiliana, raha vahiny kosa ny ambiny.
Amin'ireny asa mavitrika ireny, dia tsy mahagaga raha manana toetra mampiavaka ny seranam-piaramanidin'i Santiago. Tranobe vaovao misy faritra 90.000 metatra toradroa, lalam-piaramanidina roa miavaka, tranobe fanaraha-maso vaovao, trano fandraisam-bahiny, toerana fiara fitateram-bahoaka ary rafitra fitaterana an-dalamby - izany rehetra izany no mahatonga ny seranam-piaramanidina maoderina sy mahazatra ho an'ny mpandeha sy ny mpiasa.
3. Any amin'ny faritra avaratr'i Chili, ao an-tanànan'i Iquique , no seranam-piaramanidina fahatelo iraisam-pirenena. Tsy manana ny sehatry ny asa toy ny seranam-piaramanidina renivohitra izy io, saingy tsy mitaky ny maha-zava-dehibe izany. Mitondra fiaramanidina avy any Bolivia sy Arzantina izy. Tsy zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy ny toekarena ao amin'ny firenena izany. Iquique dia manana terminal faran'izay kely mety, na dia mahatsapa ho mendrika azy aza ny mpandeha, misy ny zavatra ilain'ny olona iray na dia misy fangatahana avo aza.
Airport eo amin'ny nosy Paska
Firenena iray mahagaga i Shily amin'ny heviny rehetra ary toy izany koa ny nosy Pakistana miorina, any amin'ny Oseana Pasifika. Ity toerana malaza manerantany ity dia an'ny fanjakana Amerikana Atsimo. Malaza be ilay nosy ka tsy dia ilaina loatra ny hanangana seranam-piaramanidina madinidinika avy ao amin'ny làlan-dàlana izay mandroso mankany Santiago , ary koa ny sidina avy any Lima (Peroa).
Fitahirizam-barotra amin'ny tanana manokana
Vehivavy miloko mafana
Sofa teny an-dalantsara
Famerenana ny famokarana tanana amin'ny tanany manokana
Monodieta 3 amin'ny 3
Salama ho an'ny psoriasis
Mora haingana ve ny manangom-bola?
Inona no homena marika perla?
Mirehitra ao an-dakozia miaraka amin'ny valindrihana
Lady Gaga dia hanambady ny mpiasany, Christian Karino
Rahoviana ny handavaka ny soavaly iray?
Manompoa voankazo maina amin'ny fampinonoana